Pakupedzisira Apple inoburitsa iyo yekuvandudza yeApple Watch, watchOS 3.1.3 | Ndinobva mac
Zvaitaridza kuti haina kusvika nanhasi yasvika. Apple inoita kuti iwanikwe kune vashandisi veApple Watch iyo yekuvandudza yavo yekushandisa system, kunyanya iri iyo nyowani vhezheni 3.1.3 yemawadhi ekambani. Tiri kutarisana neshanduro iyo musimboti inofanirwa kuve neshanduko shoma kana ichienzaniswa neshanduro 3.1.1 kunze kweimwe, mhinduro yedambudziko rakasiya michina yakavharwa.
Inofanira kutaurwa kudaro iyo watchOS 3.1.1 vhezheni yakaburitswa mukati memwedzi waZvita yakakonzera dambudziko chairo kune vazhinji vashandisi ndiani akaona zvishandiso zvavo zvakavharwa kana vachivandudza, sezvo kukundikana kwakavimbiswa kuti kambani yakabvisa izvo uye inopfuura mwedzi yapfuura kubva ipapo. Ichokwadi zvakare kuti takapfuura nguva yezororo yeKisimusi nevamwe, asi zviri pachena kuti yakarebesa.
Iye zvino nematambudziko agadziriswa, iyo Cupertino kambani yakadarika vhezheni 3.1.2 kuenda ku3.1.3 uye tinovimba kuti haizove nematambudziko nekumisikidza. Nekuti iyo nguva iyo yakavhurwa uye nezvimwe, tinogona kutaura kuti zvinoita kunge isina kana dambudziko, saka kana uine Apple Tarisa chinhu chakanakisa chaungaite kugadzirisa kune iyi vhezheni.
Rangarira kuti zvakakosha kugadzirisa iyo iPhone usati wagadzirisa wachi, inofanirwa kunge iine 50% bhatiri kana zvimwe uye zvirinani kuve nazvo zvakananga nezvimwe. Izvo zvakare zvinodiwa kuti ive yakabatana nejaja apo iyo yekuvandudza iri kurodha pasi uye inoda imwe nguva yekugadzirisa, saka dzikama nekuda kwayo. Chero zvazvingaitika, tinogona kugadzirisa wachi kubva kumaseteni ayo mu lEnda kuApple Watch app> General> Software kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Pakupedzisira Apple inoburitsa iyo yekuvandudza yeApple Watch, watchOS 3.1.3
Ndanga ndiri kubvira 11 mangwanani inguva 2 mangwanani uye inoramba ichiisa yangu iPhone 6 Plus kuti kurodha kunotora maawa matanhatu ... ini handinzwisise kuti chii chiri kuitika nekuti ndine adsl fiber uye inoshanda zvakakwana.
Dambudziko rinoratidzika kunge riri kubva kuApple, chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri pandanga ndichiedza kurodha pasi iOS kubva kuTunes, pakupedzisira ndakafunga kuadzora kuburikidza neOTA
BT Jordi, Kwaziwai. Ini handikwanise kugadzirisa yangu AppleW kune yazvino vhezheni 3.2. Ndatenda
Yakachena Dock Icons Kubva kune Eko Mafaira